UNetbootin haina kufa. Iyo yakagadziridzwa kusvika v700 uye yatove kushandisa Qt 5.12 | Linux Vakapindwa muropa
UNetbootin haina kufa. Iyo yakagadziridzwa kusvika v700 uye yatove kushandisa Qt 5.12
Parizvino, patinenge tichigadzira bootable USB kubva kuLinux, vazhinji vedu tinowanzo sarudza sarudzo senge seapp kugadzira ma bootable discs kana, ndiani achangowana mukurumbira wakawanda, Etcher. Asi izvi zvagara zvisiri izvo, zvirinani paWindows uye macOS, kwaive nechishandiso chakashandiswa zvakanyanya Aetbootin, iyo inogadzira iyo yega yandaisashandisa uye iyo yandakaziva nhasi, ndatenda LinuxUkuchinja, Iyo yavakangoburitsa vhezheni itsva.
Izvo zvave zviripo kwemazuva mashoma iUNetbootin 700, chiitiko chinouya nenhau dzakadai ikozvino shandisa Qt 5.12. Pamwe, kuti mukurumbira waro wakadzikira kuri nekuda kwekuti yakanyangarika kubva kuzvivakwa zvepamutemo zvekuparadzirwa kwakawanda kweLinux, ichiwanikwa kubva ku yekuvandudza webhusaiti kana, sezvatichatsanangura gare gare, kuburikidza nenzira dzisiri dzepamutemo.
UNetbootin 700 inosimbisa
UNetbootin inochengetedza maficha ayo, senge kugona kugadzira Live USBs nekuchengetedzwa kwekuchengetedza, asi chete kweUbuntu-based system. Izvo zvakakosha zveiyi vhezheni zvinotevera:
Zvino shandisa Qt 5.12, uchiita kusvetuka kubva kuQt4.
Rutsigiro rwepamutemo rweUbuntu 20.10, Linux Mint 19.3 uye Linux Mint 20.
Dzimwe svikiro rerudo senge gksu uye kdesu dzakabviswa.
Sezvakakurukurwa, yekutanga yenyaya dziri pamusoro ingangoita kuti UNetbootin idzokere kumatura epamutemo ezvimwe zvekugovera. Kana zvisiri, iwe unogona kugara uchishandisa iyo vhezheni yatinogona kurodha pasi kubva kune anovandudza webhusaiti (chinongedzo pamusoro). Ini ndinogona kusimbisa kuti Arch Linux yakavakirwa kugoverwa, senge Arch pachayo kana Manjaro, unayo inowanikwa muAUR.
NaEtcher uye inguva yakareba sei iri UNetbootin kunze kwemahofisi epamutemoIni handina chokwadi kana idzi inyaya huru kune vazhinji vevaverengi vedu, asi inhau uye isu takakuudza nezvazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » UNetbootin haina kufa. Iyo yakagadziridzwa kusvika v700 uye yatove kushandisa Qt 5.12
Mhoroi, mukurumbira wako wakaramba nekuti zvaive zvinouraya, iwe wakanyora mufananidzo weziso pane pendrive uye mazhinji haana kutanga. Ipapo vanhu vakatanga kuziva Etcher, asingambokundikana, anogara achitanga. Zvakare Linux mint, iyo inoshandiswa zvakanyanya, inounza yayo yega rekodhi yemifananidzo, iyo kunyangwe ichinonoka zvishoma inouraya, muLinux mint ndiyo yandinoshandisa uye mune mamwe ma distros ndinoshandisa kana fedora media writter, inoyevedza, kunyangwe ichinonoka kunyange iyo mindi imwe, ichinonoka ndinoreva iyo nguva inotora kunyora mufananidzo uyezve Etcher, inova danda rinokurumidza uye risingambokundikana. Iroro ndiro dambudziko rekusaburitsa, iro rine makwikwi anotyisa anoshanda, kwete kuti rinozomira kuve munzvimbo dzekuchengetedza. Kwaziso
AMD Radeon RX 6800: Linux bvunzo dzinotanga